ဟန်ဆန်းမှတ်စု | ဟန်ဆန်း
နေမျိုး၏ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် (စာအုပ်)
‘‌ကြေးရုပ်မြို့‌တော်’၊ ‘‌တောကျီးကန်း’၊ ‘ရုပ်ရှင်’အစရှိသည့် စကား‌ပြေလက်ရာများအပါအဝင် ‌နေမျိုး၏ ထင်ရှားသည့်စာ‌ပေလက်ရာများကို ဝတ္ထုတို‌ပေါင်းချုပ်တွင် ဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။
June 4, 2016 in စာအုပ်, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
‘စသည်၊ စသည်ဖြင့်’စာအုပ်တွင် စာပေ၊ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်းနှင့်ရသပညာ စသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာများကို အထောက်အထားမဲ့၊ အကိုး အကားမဲ့ ဖော်ပြသည့်အပြင် သေချာရေးရာသည် သုတေသနပြုမှု မရှိဘဲနှင့် မိမိထင်မြင်ယူဆသည့် ထင်မြင်ယူဆချက်အတိုင်း မိမိနားလည်သည့်ဘောင်တစ်ခု အတွင်းမှ ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့် စာတမ်းများနှင့်ဆောင်းပါးများ (ဆရာ)မြင့်သန်းက အကိုးအကားများဖြင့် ပြန်လည်ထောက်ပြရှင်းလင်းထားသည့် ဆောင်းပါးများဖြစ်သည်။
March 21, 2016 in စာအုပ်, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
ထိုစာအုပ်သည် စာပေဆိုင်ရာအယူအဆ၊ အကောက်အယူ၊ နားလည်မှုနှင့်ပညာရည်မပြည့်ဝခြင်းကြောင့် ခံစားရသည့်အကျိုးဆက်များကို ဝေဖန်ထောက်ပြထားသော ဆောင်းပါးများစုစည်းမှု စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။
March 10, 2016 in စာအုပ်, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
အမှန်စင်စစ်တွင် ထိုစာအုပ်သည် စာရေးခြင်းအတတ်ပညာ ကို လေ့လာနေသူများအပါအဝင် မိမိကိုယ်ကို စာရေးဆရာဟု အတိအပခံယူထားသူများ မဖြစ်မနေဖတ်သင့်သော စာအုပ်တစ်အုပ်သာဖြစ်သည်။
March 8, 2016 in စာအုပ်, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ နိုင်ငံရေးပြစ်မှုဖြင့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံခဲ့ရသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကျောက်ကျိယန်ကိုယ်တိုင်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် လျှို့ဝှက်နိုင်ငံရေးမှတ်တမ်းစာအုပ်ဖြစ်သည်
March 3, 2016 in စာအုပ်, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
‘‘အဲဒီ အိုးကို အစိတ်စိတ် အမွွှာမွွှာ ခွဲပြီး အနုပညာ ပုံစံသစ်ကို ဖန်တီးနိုင်တာပဲ၊ တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာကို ရှုမြင်ပုံအသစ်နဲ့ ကြည့်မြင်နိုင်တာပဲ၊ တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်‌တော်တို့ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်တာလဲ’’
February 26, 2016 in စာအုပ်, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီစာအုပ်ကို ရန်ကုန်ဘဆွေသည် ၁၉၈၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် အပြီးသတ်ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုမှတ်တမ်းစာအုပ်သည် ရေးသားပြီးချိန်မှ ၃၃ နှစ်အကြာမှသာ ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။
February 19, 2016 in စာအုပ်, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
ကျေးလက်‌နေ က‌မ္ဘောဒီးယားအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ကိုယ်တိုင်‌ရေး ဖြစ်ရပ်မှန်မှတ်တမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ အသက်ဆယ့်နှစ်နှစ်အရွယ်တွင် သူ၏ အပျိုစင်ဘဝကို ရပ်ရွာအတွင်းအတူ‌နေထိုင်သူ အမျိုးသားတစ်ဦးထံ အဖိုး‌တော်စပ်သည်ဆိုသူက ‌ရောင်းချခဲ့သည်။ လိင်မူကိစ္စကို မသိတတ်‌သေးသည့် သူမသည် ထိုအမျိုးသား၏ ကြမ်းတမ်း‌သောအပြုအမှုကို ပြင်းထန်စွာခံစားရပြီး မိမိမည်သို့ ပြုမူခံရသည်ကိုပင် မသိခဲ့ပါ။
January 5, 2016 in စာအုပ်, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.
October 20, 2013 in စာအုပ်, ဟန်ဆန်းမှတ်စု.